မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: April 2011 “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
ဒီ ကြေငြာချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုကြီး၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ။ ရက္ခအလင်းတန်း၊ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး၊ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ဒီမိုကရေစီရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကျောင်းသားလူငယ်များ အင်အားစု၊ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်၊ ၂၀၀၇ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ၊ ရခိုင်ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ၊ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ၊ အခြေခံပညာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂနဲ့ မြေလတ် ကျောင်းသားများ အဖွဲ့တို့က ပူးပေါင်း ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 9:52 PM0comments
ခင်ဦးသာ Friday, 29 April 2011 16:31(ပေးပို့ သူ-ဗမာသွေး)
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 9:51 PM0comments
Posted by admin on April 29, 2011 နေ့သစ် (ပေးပို့ သူ-ဗမာသွေး)
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တညလုံးဖြစ်ပွားတဲ့ နယ်စပ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာ ထိုင်းစစ်သား ၁ ဦး၊ အရပ်သား ၁ ဦး သေပြီး၊ စစ်သား ၁၁ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်းမှာ ဆူရင်ပြည်နယ်၊ ဖနွမ်ဒုံရတ်ခရိုင်အတွင်းက ရွာသား ၃ ယောက်ကို ကမ္ဗောဒီးယားစစ်သားတွေ အတွက် စားနပ်ရိက္ခာတွေပေးနေသလို ကမ္ဗောဒီးယား ဒုံးပျံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွက် ပစ်မှတ်တည်နေရာအညွှန်း တွေပေးတယ်လို့စွပ်စွဲပြီး ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ သက်သေအထောက်အထားမခိုင်လုံလို့ ကျေးရွာသူကြီးဟောင်း ဆ နတ်ဖင်ခေါက် ကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခန်ဖန်ဝေါင်ဆာနဲ့ ဆားမ်ဆုတ်ဖိုချိုင်းကိုတော့ ဆက်မေးစရာရှိ လို့ ထိန်းသိမ်းထားတုန်းပါ။
သူတို့တွေ စားနပ်ရိက္ခာတွေဝယ်ပြီး ကမ္ဗောဒီးယားစစ်သားတွေကို ဝေပေးနေတယ်။ ဆိုတဲ့ သတင်းကို စစ်တပ်က ရပြီး နောက်မှာ ဒီဖမ်းဆီးမှုတွေ ဖြစ်လာတာပါ။ BM 21 ဒုံးတွေ နောင်ခန်နား ရွာထဲကို မကြာခဏ ကျနေလို့ စစ်တပ်ကလည်း သံသယရှိလာတာပါ။ ရဲက သူတို့ဖုန်းထဲမှာ ကမ္ဗောဒီးယားဖက်ကသုံးတဲ့ ဒေသကုဒ်နံပတ်တွေ အများကြီး ရှာဖွေတွေ့ပါတယ်။ မနေ့မနက် ၈ နာရီ ၂၀ မှာ ပြီးသွားတဲ့ နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲအပြီးမှာ ထိုင်းစစ်သား ၆ ယောက်နဲ့ အရပ် သား ၂ ယောက် သေပြီး စစ်သား ၅၈ ယောက် ဒဏ်ရာရပါတယ်။ ထိုင်းစစ်သားတွေက လက်နက် ငယ်တွေ စိန်ပြောင်းတွေနဲ့ မပစ်မီ ဆူရင်ဒေသမှာရှိတဲ့ ထာမူအင်နဲ့ထာခွိုင်ဘုရားကျောင်းထဲကို ကမ္ဗောဒီးယားတွေ အများကြီး ၀င်လာတဲ့အချိန် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည ၈ နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ တိုက်ပွဲ စဖြစ်တာပါလို့ စစ်ဖက်ပြောရေးဆို ခွင့်ရှိသူတဦးက ပြောပါတယ်။ မနက် ၄ နာရီ ၀န်းကျင်လောက်မှာ တိုက်ပွဲအပြင်းအထန် ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းစစ်သား တွေရှိတဲ့နေရာကို ဒုံးတွေ အမြောက်ဆံတွေ အကြီးအကျယ် ထိမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မနက် ၆ နာရီလောက်မှာ ထိုင်းဖက်က ကမ္ဗောဒီးယားစစ်သားတွေကို အောင်မြင်စွာ မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဆူရင်မှာရှိတဲ့ အစိုးရဆေးရုံ ၂ ရုံနဲ့ ဆေးခန်း ၁၅ ခန်း ကို ပိတ်ထားပါတယ်။ ဆေးခန်း ၉ ခန်းကိုတော့ ဖွင့်ထားပါသေး တယ်။ အခြေအနေဆိုးတဲ့ လူနာတွေကိုတော့ နယ်စပ်က ကီလိုမီတာ ၅၀ လောက်ဝေးတဲ့ ဆေးရုံတွေကို ပြောင်းရွှေ့ ထားပါတယ်။Rest of your post
ကိုဝိုင်း | ကြာသပတေးနေ့၊ ဧပြီလ ၂၈ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၃၆ မိနစ်(ပေးပို့ သူ-ဗမာသွေး)
တရုတ်အစိုးရပိုင် China Railway Engineering Corporation အကြား “မူဆယ်-ကျောက်ဖြူ ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးစနစ် စီမံကိန်း” ဆိုင်ရာ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ်ထိုးပွဲကို နေပြည်တော်၌ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ၊ အထူးစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဒုသမ္မတ သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 9:47 PM0comments
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သိန်းစိန် အစိုးရ အပေါ် သုံးသပ်ချက်နဲ့ ပြည်သူသို့ အသိပေး တင်ပြချက်
Posted by ခွပ်ဒေါင်းမြေ at 10:48 AM0comments
ဒုတပ်ရင်းမှုး အပါအဝင် စုစုပေါင်း ၆ ဦး အာဏာရူးတစ်သိုက်အတွက် အသက်ပေးသွားပြန်ပြီ
ဗမာစစ်အစိုးရတပ်နှင့် KNLA တပ်မဟာ ၄ တပ်ရင်း ၁၂ တို့ မြိတ်ထားဝယ်ခရိုင်၊ ကစယ်ဒိုမြို့ ပေါင်းချောင်းဂွင် တွင်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ဒုစစ်ကြောင်းမှုးကိုကိုလွင် ဦးဆောင်သော ခမရ ၃၈၅ ကို တပ်မဟာ ၄ တပ်ရင်း ၁၂ မှ ဧပြီလ ၂၄ ရက်တွင်စောင့်ပစ်ရာ ဗမာစစ်အစိုးရတပ်ဖက်
၃ဦးသေပြီး ၃ ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါသည်။ သေဆုံးသူများထဲတွင် ဒုတပ်ရင်းမှုး ၁ ဦးနှင့် ဒုဗိုလ် ၁ ဦးပါဝင်ပါသည်။ ဧပြီလ ၂၃ ရက်တွင်လည်း ခမရ ၄၀၃
နှင့်ရင်ဆိုင်တိုက်ပြွဲဖစ်ရာ ဗမာစစ်အစိုးရတပ်မှ ၃ ဦးသေပြီး ၅ ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါသည်။ သေဆုံးသူများထဲတွင် တပ်ကြပ်ကြီး ၁ ဦးပါဝင်ကြောင်း
Posted by Kaw Mu Doh at 8:30 AM0comments
ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့ က မိုးစရွာသည်နှင့် မြေပုံမြို့နယ်မှ ဂီရိ မုန်တိုင်းသင့် ပြည်သူများ အနေဖြင့် စတင် အခက်အခဲ ကြုံတွေခဲ့ကြရသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
“ မိုးက ညဉ့်လယ်ပိုင်းမှာ ရုတ်တရက် ရွာသွန်းချလိုက်တော့ အိမ်တွေ ပြန်မဆောက်နိုင်သေးတဲ့ လူတွေ အထူး ဒုက္ခရောက်သွားကြရပါတယ်။ နေစရာ မရှိ ထိုင်စရာ မရှိ။ အကုန်လုံး မိုးရေစိုပြီး စုတ်ပြတ်ကုန်ပါတယ်” ဟု အိမ်ပြန်မဆောက်နိုင်သေးသူ ဂီရိမုန်တိုင်းသင့် ပြည်သူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ သတင်းကြောင့် မုန်တိုင်း မြေပုံမြို့နယ် အခြေအနေကို ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်နေသူ ရဟန်းတော် တစ်ပါးအား ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာ သူက ယခုကဲ့သို့ စတင် ပြောကြားသည်။
“လူတွေ တညလုံး မအိပ်ရဘူး။ ဦးဇင်းတို့ မြေပုံမြို့နယ်မှာ တောင်ဘက်ပိုင်းထက် ဒီဘက် ပိုင်းက ပိုဆိုးတယ်။ ဒီမြို့ထဲမှာ ဦးဇင်းမြင်နေရတာက အိမ်မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေ အများကြီးဘဲ။ လမ်းမကြီးနားက တချို့တော့ လုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ စားစရာမရှိ၊ နေစရာမရှိ ဒုက္ခဖြစ်နေသူ များတယ်။ ဦးဇင်းမှာတော့ ကျောင်းမိုးပြီးသွားလို့ ကံကောင်းတယ်။”
မြေပုံမြို့နယ်မှာ လွန်ခဲ့သောနှစ် အောက်တိုဘာလက တိုက်ခတ်ခဲ့သော မုန်တိုင်းဒဏ်ကို အဆိုးရွားဆုံး ခံခဲ့ရသော မြို့နယ် တစ်ခု ဖြစ်ပြီး အိုးအိမ် အများအပြားလည်း တခြား မြို့နယ်များထက် ပျက်စီးသွားခဲ့သည်။ သို့သော် သစ်ဝါးနှင့် ဓနိများ အလွန်ဈေးကြီးသဖြင့် အများစု လေဘေးသင့် ပြည်သူများမှာ အိမ်များကို ပြန်လည် တည်ဆောက် နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ဖြစ်နေကြရသည်။
“အများစုကတော့ တဲထိုးပြီး တာလပတ်စတွေ၊ မိုးကာတွေကို မိုးပြီး နေကြတယ်။ ဦးဇင်းရောက်ခဲ့တဲ့ ပြင်လှဘက်မှာ ဆိုလည်း ဒီအတိုင်းဘဲ လူတွေ အိမ်မဆောက်နိုင်သေးဘူး။ ဒီမြို့ထဲမှာလည်း ဒီ အတိုင်းပါဘဲ။ ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ အသက် ကိုတော့ အသေမခံနိုင်ကြဘူးဆိုတော့ ဖြစ်သလို တဲထိုး ဖျာကာ နေကြရတာပေါ့” ဟု အဆိုပါ ရဟန်းတော်က ပြောသည်။
အိမ်များ ပြန်လည် ဆောက်လုပ်ရန် အတွက် တချို့ကူညီရေး အန်ဂျီအို အဖွဲ့အစည်းများမှ အုန်း(ဓနိ)နှင့်် ၀ါးများကို လာရောက် လှူဒါန်းသော်လည်း ပြိုပျက်သွားသော အိမ်များအားလုံးကို အလုံလောက် ကူညီ ထောက်ပံ့နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
“ အခု မိုးစရွာပြီးတော့ လူတွေ အတွက် လိုအပ်တာက အမိုးအကာ၊ မျိုးစပါးနဲ့ အစားအစာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု အန်ဂျီအိုတွေရဲ့ အကူအညီကလည်း ရပ်တန့်သွားပြီဆိုတော့ ဒီလူတွေ မိုးတွင်းမှာ ဘယ်လို စားသောက်နေထိုင်ကြမလဲဆိုတာတော့ စဉ်းစားစရာပါဘဲ” ဟု ရဟန်းတော်က ပြောသည်။
(နိရဉ္စရာ သတင်းများကို မည်သူ မဆို လွတ်လပ်စွာ ကူးယူ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် သတင်းရင်းမြစ်နေရာတွင် နိရဉ္စရာ နာမည်ကို ဖေါ်ပြပေးစေလိုပါသည်။)yRest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 4:09 AM0comments
အစိုးရ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားသော်လည်း အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်ကို မပြောင်းသည့် အပြင် ကျေးရွာ ရယက ဥက္ကဌများကို အမည်ပြောင်းပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖြစ် ဆက်ခန့်ထားသဖြင့်) ပြည်သူများ အထူး မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
(နိရဉ္စရာ သတင်းများကို မည်သူ မဆို လွတ်လပ်စွာ ကူးယူ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် သတင်းရင်းမြစ်နေရာတွင် နိရဉ္စရာ နာမည်ကို ဖေါ်ပြပေးစေလိုပါသည်။Rest of your post
ယခုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေပါတီသည် စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များ မူလဖွဲ့စည်းစဉ်က လူမှုရေးအသင်းပုံစံဖြစ်ပြီး ထိုစဉ်က ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်းကို မတ်လုံးပေးပြီး အသင်းဝင်အဖြစ် သွတ်သွင်းခဲ့သည်။ ကြံ့ဖွံ့အသင်းဝင်ကဒ်ရရှိသူများသည် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်မပါဘဲ အစစ်အဆေးမရှိ နိုင်ငံတွင်း ခရီးသွားလာနိုင်သည်အထိ အခွင့်ထူးပေခဲ့ပြီး ထိုမှတဆင့် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:56 AM0comments
မြန်မာအစိုးရသစ် စတင် အာဏာရယူလာသည်မှာ ၁ လနီးပါး ကြာမြင့်လာပြီ ဖြစ်သော်လည်း သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်မရရှိသေးဘဲ အစိုးရသစ်ကို တိုက်တွန်းဝေဖန် ထောက်ပြသော သတင်းများ၊ အစိုးရ၀န်ထမ်း လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းများ အပါအ၀င် သတင်းအများစုကို ဖြုတ်ပယ်မှုများ ရှိနေသေးကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“အရင်ထက် စာရင်တော့ စိစစ်ရေးက သတင်းတွေ လွှတ်ပေးတာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သတင်းမီဒီယာတွေ အဓိက လုပ်ရမယ့် အစိုးရ၀န်ထမ်း လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကိစ္စတွေ၊ နိုင်ငံရေးအရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်တဲ့ အကြောင်းတွေကိုတော့ အခုအချိန်အထိ
ဖော်ပြခွင့်မပေးသေးဘူး” ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် သတင်းသမားတဦးက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ စာပေစိစစ်နှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဗိုလ်မှူးဟောင်း ဦးတင့်ဆွေကမူ သတင်းဂျာနယ်နှင့် ဘာသာရေး စာစောင်များမှအပ အားကစား၊ နည်းပညာ၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ သုတ၊ ရသ၊ ကလေးစာပေ အပါအ၀င် စာပေ အမျိုးအစား ၆ မျိုးကို စာပေစိစစ်ရေး တင်ရန် မလိုဘဲ ထုတ်ဝေခွင့်ပေးမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:55 AM0comments
အောက်စီဘောက်ဇ် မှာ ဒီအကြောင်းတင်ပေးပါဆိုလို့သွားဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သန်းရွှေအကြောင်းတော့ သိပ်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့ ဘဲ အောက်မှာရေးထားတဲ့ Comments ထင်မြင်ရာ မှတ်ချက်တွေဖတ်မိတော့ သဘောကျတာနဲ့Comments တွေ တင်လိုက်ပါတယ်။
ဒီမှာသာ သွားဖတ်ပေကြတော့ဗျို့ 
April 29, 2011 at 10:13 pm | #1
ခွေးကလေးသန်းရွေရေ မင်းအကြောင်းလူတိုင်းသိပါတယ်ကွာ မင်ရေးချင်တာသေက်သလွဲရေးပြီး ပြည်သူတွေဆီကငွေရှာအုံးမလို့လား မင်းကတော့သောက်သလွဲဘဲ မင်းကိုဘယ်သူကအကောင်းပြောမှာလဲ ငါးနှစ်ခလေးမေးကြည့်ရင်တောင်မင်းဘာကောင်လဲဆိုတာသိတယ်ကွာ
April 29, 2011 at 8:50 pm | #2
အင်း ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမုာ ဖြစ်နေတာတွေကို ကျွန်တော်သိတဲ့ ဟာလေးတွေကို ပြောချင်တာပါ အဲဒါတွေကလည်း တော်တော်ကိုထိရောက်ပါတယ် တကယ်လို့ သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မေးပို့ထားလိုက်ပါ ခင်ဗျာ
April 29, 2011 at 7:37 pm | #3
April 28, 2011 at 10:15 am | #4
Writer- D.R.Mg Mg of U Ne Win’s bio became latest president of BSPP(MaSaLa) and now,wait & see future of writer and his companions 0f Bo Than Shwe’s bio.
April 28, 2011 at 9:38 am | #5
ဖတ်တာကတော့ဖတ်ကြည့်ရဦးမှာဘဲ ဒီခေတ်ကြီးမှာတော့ သူရေးခြင်တာရေးလို့ရပေမယ့်
ဘယ်သူမှအားလုံးကိုယုံမည်မထင် သူ့ကိုလက်မခံတဲ့သူတွေကြားမှာ ဒီလိုသူရေးရဲတယ်ဆိုတော့ ကျုပ်တို့လေ့လာသင့်တယ် ဒါပေမယ့်ခုကတည်းက သူ့အာဘော်တွေကို ပြောင်းပြန်ပြန်တွေးကြည့်ထားပြီးပြီ
April 28, 2011 at 8:23 am | #6
April 28, 2011 at 4:05 am | #7
If every winners had the rights to write their history,we had the rights to write our history because we were leaders of General Strikes Committee,Rgn,Burma(8888)on over one million democratic strikers on freedom of Burma for one month and at that moment,we had people’s power to write Burma’s revolutionary history and rights too to move General villages but ununity of 5-biggest leaders had to let to be our historical bad fate and should consider to new generations about it.
April 28, 2011 at 3:44 am | #8
History existed on three struggles of class,Human & Nature and Human’s production and Winner had no rights to write it and any body has no rights to remove failers and History is history and every body should know all bad & good factors in history.Some talked that If winning,hero but if fallen,traitor and if you would like to be an hero,do to win one hundred victories on one hundred fightings.
April 28, 2011 at 12:11 am | #9
history is written by winners. if Hitler won WWII he will known as hero of the world. IF Burmese military still rule Burma 50 years from now, Than Shwe will probably known as hero in our future generations. my young nieces and nephews do not know who U ba win, U razat, U Ba Cho….and so on are. so have to make sure our children know real history and teach them the truth and try to stop the military from winning so the real history can be written .
April 27, 2011 at 11:07 pm | #10
လူတွေပြောနေကြတဲ့ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေးတယ်ဆိုတဲ့ စကားကိုသူကနားလည်မှုလွဲတာလား၊ တကယ်သဘောမပေါက်တာလားတော့ မသိဘူး၊ သူ့သမိုင်းကိုသူကိုယ်တိုင်တိတိကျကျကောင်းအောင် ရေးတာနေမှာပေါ့။ရေးပါစေလေ။ လူတွေမှာ ဦးနှောက်ရှိပါတယ်။
April 27, 2011 at 10:00 pm | #11
ဝယ်ပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ အဆိပ်အတောက်တွေကို လက်ခံလိုက်သလို ဖြစ်သွားမှာ….. နောင်လာ နောက်သားတွေကိုပါ အဆိပ်ခပ် မယ်ထင့်တယ်…..။
သူ့ရဲ့ ရှုမငြီးတဲ့ မိန်းမကြီးကိုရော ဘယ်လိုအဖတ်တင် လိုက်တယ်ဆိုတာများ ပါသလားမသိဘူး…..။
သူ့သမီးကို ယူခိုင်းဖို့ ယောင်္ကျား ခက်ခက်ခဲခဲ ရွေးရတာတော့ ထည့်မယ် မထင်…..။
April 27, 2011 at 8:24 pm | #12
Cleaver Idiot,he destroyed everything.Especially our mentality.Rot In Hell..
April 27, 2011 at 6:39 pm | #13
သမိုင်းရာဇ၀င်မှာ စံတင်လောက်အောင် မိုက်ရိုင်းဆိုးသွမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာ သူ့ကိုယ်သူလည်း သိတယ်လေ..ဒါကြောင့် သူမသေခင်မှာ သူ့သမိုင်းကိုသူကောင်းအောင် အလိမ်အညာတွေနဲ့ဖုံးဖိရေးဘို့ ကြိူးစားတာပေါ့..နောင်တခတ်မှာ မသိတဲ့သူတွေ အမှန်ထင်နိုင်အောင်လေ..သမိုင်းဆိုတာ ညာလို့မှမရတာ..အထူးသဖြင့် သူ့လိုလူတစ်ယောက်အတွက် ဖုံးကွယ်လိမ်ညာဘို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး..ဦးနှောက်ရှိတဲ့သူတိုင်း သန်းရွှေ ဘယ်လိုလူလည်းဆိုတာ သိကြပါတယ်..
April 27, 2011 at 4:59 pm | #14
ကောင်းတယ်၂ သူ့အကြောင်းအသေးစိတ်ရေးရင် အရောင်းကောင်းအုံးမှာ။ ဓါးပြ တိုက်ခဲ့တာတို့။ ခိုးခဲ့တာ တွေ ၊ စသည်ဖြစ်…. ကိုယ်ငါချဉ်လေ
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:22 AM0comments
စာကြွင်း... မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီ စနစ်နဲ့ စစ်မှန်သောလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားဖို့ ရန်မှာ အင်မတန်မှ အားနည်းနေပါသေးတယ်။လက်ရှိ ပြရုပ် ဒီမိုကရေစီအစိုးရက ဗမာပြည်အတွက် ဘာမှာထူးခြားပြီးကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဆင်ခြင်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့ အခြေစိုက် ဆွစ်ဇာလန် သံအမတ်ကြီး ခရစ္စတိုဖာ ဘာဂျန်နာက အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးကို ရန်ကုန်မြို့က NLD ရုံးချုပ်မှာ နေ့လည် ၃ နာရီက သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ တွေ့ဆုံပွဲမှာ လက်ရှိ အစိုးရသစ်အောက်မှာ NLD ရပ်တည်နေရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ဆွစ်ဇာလန် သံအမတ်ကြီးက မေးမြန်းခဲ့ပြီး လိုအပ်သလို အကူအညီပေးဖို့လည်း ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးက RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
“သံအမတ်နဲ့က တော်တော် ၄၅ မိနစ်လောက်တော့ ကြာတယ်ဗျ။ အဲဒါတော့ ကျွန်တော်ရယ်၊ ကိုဝင်းထိန်ရယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ကိုဟံသာမြင့်ရယ်၊ သုံးယောက်ပေါ့ဗျာ။ တခုတော့ ပြောတယ်၊ ခင်ဗျားတို့ ဒီ အီးယူတို့ ဘာတို့ လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ကာ ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုကို အားပေးမဲ့၊ ထောက်ခံနိုင်မဲ့၊ အကျိုးရှိစေမဲ့ သဘောတွေကိုပဲ ပြောကြပါ၊ လုပ်ကြပါ၊ ဒါပဲ ကျွန်တော် လေးလေးနက်နက် မှာချင်တယ်၊ ဒီလောက်ပါပဲ။”
“ကျန်တာတွေကတော့ ခင်ဗျားတို့ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့၊ ကျုပ်တို့နဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာအရ ဒါကတော့ ခင်ဗျားတို့ ထောက်ပံ့ ကူညီ၊ ဒီလောက်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ကိစ္စဝိစ္စ အားလုံးက ကျုပ်တို့ အင်အား ကျုပ်တို့ထဲမှာ ရှိတယ်၊ ကျုပ်တို့ဟာ ကျုပ်တို့ လုပ်မယ်၊ ဒါပဲ။”
အစိုးရသစ် တက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း အခြေအနေတွေအကြောင်း ပြောဆိုကြတဲ့အခါမှာတော့ ခုချိန်ထိ ထူးခြားမှု တစုံတရာ မတွေ့ရသေးကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်မပေးသေးတာက အဓိက ဖြစ်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့တယ်လို့ ဦးတင်ဦးက ပြောပါတယ်။
ဆွစ်ဇာလန်သံအမတ်ကြီး ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ လူမှုရေး အကူအညီနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စီစဉ်နေတဲ့ မြန်မာ့ လယ်သမားတွေအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ မြွေဆိပ်ဖြေဆေး ကူညီရေးကိစ္စ ပြောဆိုလိုက်တယ်လို့ ဦးတင်ဦးက ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ နေ့ခင်းပိုင်းကလည်း ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသံရုံးက နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအတွင်းဝန် Mads Bayer က ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းထိန်တို့ကို NLD ရုံးချုပ်ကို သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:30 PM0comments
မြန်မာကို ကုန်သွယ်မှု သက်ညှာခွင့် ပြန်ပေးဖို့ ပါတီတွေ တိုက်တွန်း
By ကျော်ကျော်သိန်း ကြာသပတေး, 28 ဧပြီ 2011(ပေးပို့ သူ-ဗမာသွေး)
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဒဏ်ခတ် အရေးယူထားတဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ (EU) အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်ကုန်တွေကို အခွန်သက်သာ လျှော့ပေါ့ပေးဖို့ ဒီမိုကရေစီ မိတ်ဆွေ ပါတီတွေက တိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရ အဖွဲ့ထဲက အရပ်သား အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေအပေါ် ခရီးသွားလာခွင့် ကန့်သတ်ချက်ကို EU က တနှစ် ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အခုလို ထပ်ပြီး တိုက်တွန်းလိုက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဘန်ကောက်ကနေ ကိုကျော်ကျော်သိန်းက သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
EU က ရုပ်သိမ်းထားတဲ့ GSP ခေါ် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အထူးအခွင့်အရေး ခံစားခွင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ပေးပါဆိုပြီး ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ခဲ့ကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီ မိတ်ဆွေ ပါတီများ ၁၁ ပါတီက စုပေါင်းပြီးတော့ EU ဆီ အိတ်ဖွင့်ပေးစာနဲ့ တိုက်တွန်းဖို့ ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့ အစည်းအဝေးမှာ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ အရေးယူထားတာတွေကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ ဒီမိုကရေစီ မိတ်ဆွေ ပါတီတွေကနေ ပထမ အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစောင် ပေးပို့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အခုတခါ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ် တိုက်တွန်းချက်တခု ထပ်လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးပို့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ EU ဘက်ကနေ အရေးယူမှု အကုန်လုံး မရုပ်သိမ်းပေမဲ့ မြန်မာအစိုးရ အဖွဲ့ထဲက အရပ်သား အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေအပေါ် ခရီးသွားလာခွင့် ကန့်သတ်ချက်ကို တနှစ် ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။
အခု အိတ်ဖွင့်ပေးစာထဲမှာ အဲဒီလို ရုပ်သိမ်းပေးတာကို ကျေးဇူးတင်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ GSP အခွင့်အရေး ပြန်ပေးဖို့အကြောင်း တိုက်တွန်းထားတယ်လို့ အစည်းအဝေး တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီပါတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းတင်အောင်က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“အဓိကတော့ GSP အခွင့်အရေးကို ပြန်လည်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ ခံစားခွင့် ရရှိရေးအတွက် EU အနေနဲ့ ပြန်လည်စဉ်းစား သုံးသပ်ပေးပါ ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့က မေတ္တာရပ်ခံတာပါ။ GSP ဆိုတာကတော့ မြန်မာပြည်က ထုတ်ကုန်တွေကို ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေ အနေနဲ့ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေါ့ဗျာ၊ အထွေထွေ သက်သာ လျှော့ပေါ့ပေးရေးပေါ့ဗျာ။”
GSP အခွင့်အရေးကို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ ၁၇၆ နိုင်ငံအတွက် EU က ပေးထားတာဖြစ်ပြီး EU ဈေးကွက်ထဲ တင်သွင်းတဲ့ အဲဒီနိုင်ငံတွေက ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အခွန်လျှော့ပေါ့ ကောက်ယူတဲ့ အခွင့်အရေး ပေးထားတာပါ။ GSP အခွင့်အရေးပေးတဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျှော့ချဖို့၊ ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အားပေးဖို့နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ဖြစ်ပေါ်စေဖို့တို့ ဖြစ်တယ်လို့ EU ရဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
EU က မြန်မာနိုင်ငံကို ဒဏ်ခတ် အရေးယူထားတာတွေ ရှိတယ် ဆိုပေမဲ့ ကုန်ပစ္စည်း တင်ပို့တာကတော့ ရှိနေဆဲပါလို့ ရန်ကုန်မြို့ခံ ကုန်သည်တဦးက ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ သိသလောက်တော့ မြန်မာပြည်ကနေ ဥရောပနိုင်ငံ အသီးသီးကို အဓိက ပို့တာတော့ လက်ခစား စနစ်နဲ့ ပို့တဲ့ အထည်ချုပ်တွေကတော့ အဓိက များတာပေါ့။ ဒုတိယပိုင်းလောက်မှာတော့ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ သစ်တောထွက်ပစ္စည်း အနည်းငယ်လောက် ပို့တာရှိတယ်။ ကောက်ပဲသီးနှံက ပို့တော့ ပို့တယ်၊ ပမာဏတော့ မများဘူး။”
သူတို့က စာပို့လိုက်ရုံနဲ့ EU ဘက်က လိုက်လုပ်ပေးမှာ မဟုတ်ဘဲ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်မှုက အဓိက ကျပါတယ်လို့ ကိုသိန်းတင်အောင်က ပြောပါတယ်။
“အဓိကကတော့ ဒီအစိုးရသစ်ရဲ့ Good Governance နဲ့ Clean Government အကောင်အထည် ဖော်ဖို့က ဘယ်လောက်အထိ ထင်သာမြင်သာ ရှိမလဲ၊ ဘယ်လောက်အထိ ရလဒ်ထွက်မလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ အဓိက အပြောင်းအလဲ ဖြစ်မှာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ကတော့ ဒါ သဘောထား ပေးတာပါ။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဒီလို တောင်းဆိုမှုကြောင့် တခုတည်းနဲ့တင်လည်း GSP က ရလာနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့က သိပါတယ်။
“ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ သဘောထားက ဒါတွေဟာ လိုအပ်နေတယ်၊ တဘက်ကလည်း ကျနော်တို့က အစိုးရသစ်ကို သူပြောတဲ့အတိုင်း Good Governance တို့ Clean Government တို့ Transparency ရှိအောင်၊ Accountability ရှိအောင် ကျနော်တို့ကလည်း ဖိအားပေးမယ်၊ တွန်းအားပေးမယ်၊ လိုအပ်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်း ပြောထားပါတယ်။”
EU က မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဒဏ်ခတ် အရေးယူထားတာကို မကြာသေးခင်ကပဲ နောက်ထပ်တနှစ် သက်တမ်း ထပ်တိုးထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း EU နိုင်ငံတွေထဲမှာ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံချင်တဲ့ နိုင်ငံတွေ အများအပြား ရှိနေပြီး လျှော့ပေါ့ပေးချင်တဲ့ သဘောထား လက္ခဏာတွေကိုလည်း တွေ့နေရပါတယ်။
GSP အခွင့်အလမ်း ပြန်ပေးမယ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်ပစ္စည်းတွေ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းအား ပိုကောင်းပြီး ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုပါ တိုးတက်လာမယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့ခံ ကုန်သည်က မျှော်လင့်ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရ အနေနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးတာ၊ ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေးကို အခိုင်အမာ လုပ်ဆောင်တာလို သိသာ ထင်ရှားတဲ့ တိုးတက်မှုတွေ မရှိဘဲနဲ့တော့ ဒဏ်ခတ် အရေးယူထားတာတွေကို မရုပ်သိမ်းသင့်သေးဘူးလို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ အများအပြားက ပြောကြပါတယ်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:29 PM0comments
By ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) ကြာသပတေး, 28 ဧပြီ 2011(ပေးပို့ သူ-ဗမာသွေး)
အီဂျစ်သမ္မတဟောင်း ဟို့စ်နီ မူဘာရက်ခ် (Hosni Mubarak) ရာထူးက နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ နောက်ပိုင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ သတ်ဖြတ် တိုက်ခိုက်မှုတွေကို အီဂျစ်အစိုးရက အရေးယူ ဖြေရှင်းပေးတာမျိုးတွေ မရှိခဲ့ဘူးလို့ ဖော်ပြပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတကာ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကော်မရှင်ဟာ အဓိက ပါတီကြီး ၂ ရပ်က အဖွဲ့ဝင်တွေ ပါဝင်တဲ့ သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါတယ်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:27 PM0comments
by Daniel Schearf's Report in Burmese ဗုဒ္ဓဟူး, 27 ဧပြီ 2011(ပေးပို့ သူ-ဗမာသွေး)
ပြည်သူတွေကို အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် မြှင့်တင်ရေးမှာ နှစ်နိုင်ငံလုံးက နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ ဒီနယ်စပ်ဒေသ အငြင်းပွားမှုကို အသုံးချနေကြတာဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:25 PM0comments
ဧရာဝတီ Thursday, 28 April 2011 12:05(ပေးပို့ သူ-ဗမာသွေး)
ထိုင်းနယ်စပ်မှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ တရားမ၀င် သွင်းသည့် ဂျပန် တပတ်ရစ်ကား အရေအတွက်မှာ လတ်တလော၌ တညလျှင် အစီးရေ ၁၀၀ နှင့် အထက်တွင် ရှိနေသည် ဟု ကားကုန်သည်များက ပြောသည်။
ယင်း ဂျပန်တပတ်ရစ်ကားများကို အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ နီပေါ နှင့် သီရီလင်္ကာ စသည့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများသို့ တဆင့် ပြန်လည် ရောင်းချသည့်ဈေးကွက် မြင့်မားလာသောကြောင့် မြန်မာသို့ တင်သွင်းမှု များပြားလာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
မြန်မာ ကားကုန်သည် တဦးက“ထိုင်းဘက်က၀င်တဲ့ ဂျပန်တပတ်ရစ်ကားတွေကို အရင်က မြန်မာတွေ အစီးများပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း ဒီကားတွေကို တဆင့် ပြန်ရောင်းတဲ့ဈေးကွက်က ကြီးလာတော့ မြန်မာဘက်ကိုဝင်တဲ့ ကားတွေ လာ သလောက် ကုန်တဲ့အထိဖြစ်နေလို့ ကားကုန်သည်တွေ အရင်ကထက် ပိုပြီး အပြိုင်သွင်းနေကြတယ်”ဟု ပြောသည်။
မြန်မာဘက်မှ အ၀ယ်များသောကြောင့် လက်ရှိ မဲဆောက်မြို့ဘက် ထိုင်း-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတံတားဘေးရှိ အမှတ် ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၇၊ လှေဂိတ်များတွင် မြန်မာဘက်ရောင်းချမည့် ဂျပန် တပတ်ရစ်ကား အစီးရေ ၄၀၀၀ ခန့်ရှိနေသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှတဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်ဆိပ်ကမ်းသို့ရောက်ရှိလာသည့် ကားများကို ထိုင်းတပတ်ရစ်ကားကုမ္ပဏီများက ၁၂ ဘီးတပ် ကားသယ်ယာဉ်များဖြင့် တင်ဆောင်ကာ တရက်လျှင်အစီးရေ ၁၀၀ ကျော်ကို မဲဆောက်ကမ်းနားရှိ လှေဆိပ်များသို့ နေ့စဉ်လာရောက်ပို့ဆောင်လျက် ရှိသည်။
ယမန်နှစ်ဇူလိုင်လမှစ၍ မြန်မာအာဏာပိုင်များက လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့် မဲဆောက်-မြ၀တီ ချစ်ကြည်ရေးတံတား အပါအ၀င်၊ တံတားဘေး ၀ဲယာရှိ တရားမ၀င် လှေဂိတ် ၃၀ ခန့်ကို ပိတ်လိုက်ပြီးနောက် တရားဝင် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ရပ်တံ့ခဲ့သည်။
နယ်စပ်ဂိတ်များပိတ်လိုက်သောကြောင့် မြန်မာကုန်သည်များက ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းများကို မြန်မာဘက်ခိုးသွင်းရသော် လည်း၊ ဂျပန် တပတ်ရစ် ကား တင်ပို့မှုများမှာ လုံးဝရပ်တံ့ခြင်းမရှိဟု မြန်မာ ကားကုန်သည်က ပြောသည်။
၎င်းက“မြန်မာဘက်က ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကို ပိတ်လို့ရချင်ရလိမ့်မယ်၊ ဒီကားသွင်းတာကိုတော့၊ ဘယ်လိုမှပိတ်လို့မရဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဒီကားလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတာ စစ်တပ်ကြီးကြီးပိုင်းက လူတွေ လုပ်နေတာဖြစ်တယ်၊ သူတို့သား သမီးတွေနဲ့ သူတို့လူတွေပဲ ဒီနယ်စပ်အထိ၊ စီမံခန့်ခွဲနေတာဖြစ်တယ်၊ ဒီအလုပ်ကို သာမန်လူတွေလုပ်လို့မရဘူး”ဟု ဆက်ပြောသည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:22 PM0comments
သတင်းသမားများ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အတွက် ငွေလှူ
ရန်ပိုင် Thursday, 28 April 2011 18:03
ပြည်တွင်းစာနယ်ဇင်း သတင်းသမား ၂၀ခန့် စုပေါင်းပြီး ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အတွက် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) သို့ ယနေ့ သွားရောက်၍ ကျပ်၂ သိန်း လှူဒါန်းကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အနေဖြင့် ထောင်တွင်းစားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများရှိသည့်အပြင် မိသားစုများအနေဖြင့်လည်း ပြင်ပ ၌ စီးပွားရေး လူမှုရေး ဒုက္ခများကို ရင်ဆိုင်နေရသည့် အတွက် စာနယ်ဇင်းသတင်းထောက်များ စုပေါင်းပြီး လှူဒါန်းခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အလွတ်သတင်းထောက် တဦးဖြစ်သူ ကိုမြင့်ကျော် က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ငွေကတော့ အားလုံးအတွက် လုံလောက်ချင်မှ လုံလောက်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ထောင်ဝင်စာတွေ့ဖို့ အခက်အခဲရှိနေတဲ့ မိသားစုတွေ အတွက် ကျနော်တို့လုပ်အားနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ ကူညီတာပါ”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
စာနယ်ဇင်းသမားများ အနေဖြင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား ယခုကဲ့သို့ ကူညီခြင်းမှာ လူသားချင်းစာနာသည့် အနေဖြင့် ကူညီ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှု တခုမဟုတ်ကြောင်း၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်းအတွင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို မကူညီရဲသည့် စိတ်ဓာတ်များ ပပျောက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကိုမြင့်ကျော်က ဆက်လက်ရှင်းပြသည်။
ယခုလှူဒါန်းခြင်းကို ကိုမြင့်ကျော်၊ သာလွန်ဇောင်းထက် စသည့် စာနယ်ဇင်းသမားများက ကမကထပြုဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စာနယ်ဇင်းသမားများ အနေဖြင့် ယခုအချိန်တွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီရေး အတွက် အားလုံးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်လက်လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ကိုမြင့်ကျော်က ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက စာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းလောကတွင် ထင်ရှားသည် စာရေးဆရာကြီးများ ဖြစ်သော ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ၊ သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၊ ဆရာလူထု စိန်ဝင်း၊ ဦးသာဘန်း၊ ဆရာဇော်ဇော်အောင်၊ မောင်မိုးသူ၊ ထက်မြက်၊ ပြည်သွေးနိုင်၊ ကဗျာဆရာ အောင်ဘညို၊ ငြိမ်းသစ်၊ ယမုံ၊ ညွန့်သစ်၊ မောင်ဒေါင်း၊ ဂီတပညာရှင် မဇ္ဈိမလှိုင်း ကိုရဲလွင်စသည့် နိုင်ငံရေးနှင့် စာပေ
အနုပညာ နယ်ပယ်မှ လူပေါင်း ၃၂၄ ဦး စုပေါင်းလက်မှတ်ထိုးပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံသို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် စာရေးတောင်းဆိုခဲ့သည်။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများတွင် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသူ များပြားသည့်အတွက် မိသားစုများ ခံစားနေရသည့် ဒုက္ခကြီးမား သည့်အပြင် ၎င်းတို့၏ လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် စွမ်းရည်များအားလုံး ဆုံးရှုံးနေရသည့်အတွက် တိုင်းပြည်အတွက် နစ်နာကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်သင့်သည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း သတင်းထောက် ကိုမြင့်ကျော်က ဆိုသည်။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အကူအညီပေးရေး နှင့် ပတ်သက်၍ NLDသည် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအလိုက် လည်းကောင်း၊ မြို့နယ်များအလိုက် လည်းကောင်း တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေသည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:20 PM0comments
2011-04-28 RFA(ပေးပို့ သူ-ဗမာသွေး)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဗီဒီယို မိတ်ဆက်စကားကြောင့် ဆုပေးပွဲအခန်းထဲမှာ ရှိနေသူအားလုံးဟာ အထူးပဲ စိတ်အား တက်ကြွခဲ့ကြရပါတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အယ်လီနာ ရုစဗဲ့ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ အကြောင်း၊ ကျမတို့အားလုံးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ အင်မတန် အရေးကြီးကြောင်း၊ တကမ္ဘာလုံး လိုက်ပါဆောင်ရွက်လာတဲ့အထိ ကြိုးပမ်းသွားဖို့ လိုအပ်ကြောင်း တိုက်တွန်းအားပေး ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ Miss Galligan ပြောသွားတာပါ။
ဒီနှစ်အတွက် ဆုရှင်တွေအဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ အယ်လီနာ ရုစဗဲ့ဆု ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသူတွေကတော့ ဟေတီနိုင်ငံက အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင် ယော်လတ်ယန်တီ (Yolette Jeanty) ၊ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေ အကြောင်း ပြောင်မြောက်စွာ ဖော်ထုတ်ရေးသားတင်ပြခဲ့သူ NPR သတင်းထောက် ရာနီးမွန်တိန်း (Ranee Montagne) နဲ့ အာဖဂန်အမျိုးသမီးများအတွက် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့တည်ထောင်သူ စူနီတာ ဗစ်စ်ဝါနက် (Sunita Viswanath) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:19 PM0comments
WHO (2002). World report on violence and health. Geneva, WHO.Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:16 PM0comments
ဒီစာစု လေးကို ဖတ်ပြီးသွားရင် မိတ်ဆွေတို့ ခံစားရသမျှကို ပြောပြချင်တယ် ဆိုရင် ဒီလင့်လေးကို နှိပ်ပြီး ပြောကြားနိူင်ပါတယ် ။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:14 PM0comments
Posted by ခွပ်ဒေါင်းမြေ at 11:06 AM0comments
ခွဲတမ်း စနစ်ကြောင့် စက်သုံးဆီ ဈေးမြင့် တက်ရာ တစ်ဂါလံ တစ်သောင်း အထိ ဖြစ်နိုင်
April 27, 2011, FNG(ပေးပို့ သူ -ဗမာသွေး)
ပုဂ္ဂလိက ဓာတ်ဆီဆိုင်များ တွင် ခွဲတမ်း စနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေး သည့် စနစ် ကြောင့် ဒီဇယ်၊ဓာတ်ဆီ စသည့် စက်သုံးဆီ ဈေး များ ပြန်လည် မြင့် တက် သွား ပြီး ဒီဇယ်ဆီ တစ်ဂါလံ လျှင် ကျပ်
၇၀၀၀ ခန့် ထိ ပေါက်ဈေး ရှိ ပြီး နယ်မြို့ အချို့ တွင် ဓာတ်ဆီ တစ်ဂါလံ မှာ ကျပ် ၆၀၀၀ ခန့်ဈေး ပေါက်သည်။
ဓာတ်ဆီဆိုင်များ တွင် မော်တော် ကား တစ်စီး အတွက် ၂ ဂါလံသာ ရောင်းချပေးမှု ကြောင့် ဓာတ်ဆီ မှောင်ခိုရောင်း သည့် ဈေးကွက် တွင် ဈေးပြန်လည် တက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး သင်္ကြန်
ကာလ အတွင်း က ရောင်း ချသည့် ဈေးနှုန်းထက် ကျပ် ၅၀၀ ခန့် ပိုမို မြင့်မား သည်။
နွေရာသီဉ် ရာသီဥတု ပူပြင်းသောကြောင့် လေအေးပေးစက်များ ဖွင့် ရန် အတွက် လိုအပ်သည့် လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန် မလာ သောကြောင့် မီးစက် ဖြင့် လျှပ် စစ်ဓာတ်အား ရယူရသများ မှာ ဒီဇယ်ဆီ ကို အဓိက ထား သုံး ရသဖြင့် ဒီဇယ်ဆီ ဈေးမှာ အမြင့် ဆုံး သို့ ရောက် ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။
ဓာတ်ဆီဈေး မြင့်တက် မှု ကြောင့် အငှားယာဉ် နှင့် ခရီးသည် ကား ပြေးဆွဲ သူများ မှာ လည်းတွက်ခြေမကိုက် ဖြစ်နေ ပြီး CNG ဓာတ်ငွေ့ ထည့်သွင်း ပြေးဆွဲရသည့် မော်တော်ကား များ မှာ လည် CNG ဆိုင်များ တွင် နေ့ တစ်ဝက် နီးပါး တန်းစီ ရသည် ဟု သိရသည်။
ဂါလံ ငါးဆယ် ၀င် ဒီဇယ် တစ်ပေပါလျှင် ကျပ် နှစ် သိန်း ကျော် ဈေး ပေါက်သည်။ ယခုနှစ် ဆန်းပိုင်းက တစ်ပီပါ လျှင် ကျပ် တစ်သိန်း ခြောက် သောင်း ကျော်သာ ပေါက် ဈေး ရှိပြီး နိုင်ငံ တကာရေနံစိမ်း ဈေးနှုန်း မြင့် တက်မှု နှင့် အတူ ပြန်လည် မြင့်တက်ခဲ့သည်။
ပုဂ္ဂလိက ဓာတ်ဆီ ဆိုင်များဖွင့်လှစ် ပြီး ပါက မှောင်ခို ဓာတ်ဆီ ဈေးကွက် ပျောက် ကွယ် သွား မည် ဟု အာဏာပိုင်များ က သုံးသပ် ခဲ့သော် လည်း ခွဲတမ်း စနစ် ကို အတည်ပြုပြီး နောက် ပြန်လည် ကျယ်ပြန် လာခဲ့သည်။
ရန်ကုန် မြို့ မှ ပုဂ္ဂလိက ဓာတ်ဆီ ဆိုင် မန် နေဂျာ တစ်ဦးက စက်သုံး ဆီ များ ပြန်လည် မြင့် တက် နိုင်ပြီး နိုင်ငံ တကာ ပေါက်ဈေး ကျဆင်း မှု မရှိ လျှင် တစ်ဂါလံ တစ်သောင်း အထိ ဖြစ် နိုင် ဟု ပြောသည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 2:12 PM0comments
By ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) ဗုဒ္ဓဟူး, 27 ဧပြီ 2011(ပေးပို့ သူ -ဗမာသွေး)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း နယ်စစ်မှာတော့ အာဖဂန်နဲ့ ပါကစ္စတန် လုံခြုံရေးတပ်တွေ ဟိုဘက်ဒီဘက် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်ကြတယ်လို့ ပါကစ္စတန် အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။ တောင် ဝါဇီရစ္စတန် ပြည်နယ်မှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဖြစ်ပွားတဲ့ ဒီတိုက်ပွဲငယ်တွေအတွင်း ပါကစ္စတန်ဘက်က တဦး သေဆုံးသွားပါတယ်။ အာဖဂန် တပ်ဖွဲ့တွေဘက်က စတင်ပစ်ခတ်တာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 2:11 PM0comments
2011-04-27 RFA(ပေးပို့ သူ -ဗမာသွေး)
ဒါပေမဲ့ အခုတက်လာတဲ့ မြန်မာအစိုးရသစ်ကို သူတို့အနေနဲ့ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မြန်မာ့အရေးကို အောင်မြင်အောင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိတယ်လို့ အမေရိကန် ဒုလက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မစ္စတာ ဂျိုးဆက်ဖ် ယွန် က အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ ပြသသွားတဲ့ Burma Soldier မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပြပွဲ အပြီးမှာ ပြောကြားသွားပါတယ်။Rest of your post
By ဦးမိုးဇော် ဗုဒ္ဓဟူး, 27 ဧပြီ 2011(ပေးပို့ သူ -ဗမာသွေး)
ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်နဲ့ ရှမ်း စတဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီ ၅ ပါတီဟာ အရင်ကလည်း ဒု-သမ္မတ တနေရာကို တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် တဦးဦးကို ခန့်ထားဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ရာမှာ သူတို့ တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်း အောင်မြင်မှု ရခဲ့ဖူးပါတယ်။Rest of your post
ရခိုင်လူမျိုးတို့ရဲ့ အမျိုးဘာသာ သာသနာနဲ့ ယဉ်ကျေးမူ့ ဖော်ထုတ်ရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသား လူထုတရပ်လုံး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိရေးတို့ အပါအဝင် အချက် ၇ ချက်ကို ရည်ရွယ်ပြီး ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်တွင်းမှာ လျှို့ဝှက်ထုတ်ဝေတဲ့ ရက္ခအလင်းတန်း စာစောင်ကို အခုအခါ ပြည်နယ် အတွင်းမှာ ဖြန့်ဝေနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရခိုင်စာပေနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ အဲဒီစာစောင်မှာ ရခိုင်သမိုင်းနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုရေးရာတွေ အပြင် ဒီမိုကရေစီအရေး၊ တိုင်းရင်းသားအရေးတွေကို ကဗျာတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲဒီစာစောင်ကို ဒီလကနေစပြီး လျှို့ဝှက်ပြီး လစဉ် ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိသွားမယ်လို့ ရက္ခိတ လူငယ်အဖွဲ့ဝင် အမျိုးသမီးတဦးက ပြောပါတယ်။
“တနင်္ဂနွေနေ့က စပြီးတော့ ကျွန်မတို့ ရခိုင်ပြည်ရဲ့ နယ်စပ် တောဖက်တွေပေါ့ ဖြန့်တယ်။ ကျွန်မတို့ ဒီ ရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ နယ်တွေပေါ့။ ဒီနှစ်ကျတော့ အီးမေးလ်ကနေပြီးတော့ ပြည်ပတွေကို ဖြန့်တယ်။ ပြည်ပရယ်၊ ပြီးတော့ mail account ပေးထားတဲ့ လူတွေကိုပေါ့။ အားလုံး လူတိုင်းလိုလိုက လက်ခံပါတယ်။ နောက်ထပ် စာစောင် ဘယ်တော့ ထွက်မလဲပဲ မေးကြပါတယ်။”
“အနှောင့်အယှက်ကတော့ မတွေ့ရသေးပါဘူး အခုလောလောဆယ်။ ဟုတ်ကဲ့ အန္တရာယ် ရှိနိုင်တဲ့ ကြားထဲကနေ ကြိုးပမ်းပြီးတော့ ဖြန့်နေတာပါ။ ကျွန်မတို့ ဘယ်လို ကြုံတွေ့ရမလဲ ဆိုတာတော့ မသိသေးဘူးပေါ့။”
အခုအထိ အဲဒီ စာစောင် ဖြန့်ဝေရာမှာ အနှောင့်အယှက် မတွေ့ရသေးကြောင်းနဲ့ ဘယ်လို အခက်အခဲရှိရှိ လစဉ်ထုတ်ဝေသွားဖို့ အတွက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်း လူငယ် အမျိုးသမီးကပဲ ပြောပါတယ်။Rest of your post
By ဦးသားညွန့်ဦး အင်္ဂါ, 26 ဧပြီ 2011(ပေးပို့ သူ -ဗမာသွေး)
ဗိုလ်မှူးဟောင်း ဦးအောင်လင်းထွဋ် သုံးသပ် ပြောဆိုသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 2:06 PM0comments